Nahitam-pahombiazana ny tafika masina – FJKM Ambavahadimitafo Nahitam-pahombiazana ny tafika masina |
Nahitam-pahombiazana ny tafika masina
Nanomboka ny 27 jolay 2007 ny asan’ny Mpanao Tafika Masina.
Ny asa voalohany natao dia ny famangiana ireo olona any antokantranony. Ireo tarika voatendry hiasa isaky ny faritra no nanatanteraka izany.
Ny 28 jolay dia samy nanao ireo tatitra ny isan-tarika koa tsapa fa dia nahitam-pahombiazana ny vokatra : naneo hafaliana ireo novangiana ary narisika ny hanatrika ny fampianarana.
Nanomboka ny 29 ny fitoriana hatao ao amin’ny akany Ralibera Daniel.